पत्याउनै गाह्रो – Ekathmandunepal
बोइफ्रेन्ड संग सेक्स भिडियो कल गर्दै युवती । लिक भएको क्लिप भिडियो हेर्नुहोस
८ चैत्र २०७४, बिहीबार १७:३५ ekathmandu Nepal 0
बोइफ्रेन्ड संग सेक्स भिडियो कल गर्दै युवती । लिक भएको क्लिप भिडियो हेर्नुहोस गर्दा गर्दा घर आईपुग्यो आमा आएर आएर कार बाट उनको हात समाउन थाल्नु भयो म पनि उनको पछि पछि हिडे । दिद […]
८ चैत्र २०७४, बिहीबार १६:२५ ekathmandu Nepal 0
गर्भासयमा भएको क्यान्सरका कारण आमा बन्न नसक्ने बताएपछि सिवोन टेरी निकै दुःखी भइन् । आमा बनेर आफ्नो दुई वर्षकी छोरी शेशालाई भाइ वा बहिनी दिने उनको इच्छा थियो । दक्षिणपूर्वी लण्डनका ३१ वर्षकी सिवोन र […]
यसरी भयो युएस बंगला बिमान दुर्घटना :विमानस्थल असुरक्षित होइन !
७ चैत्र २०७४, बुधबार १७:४१ ekathmandu Nepal 0
सन्त गाहा मगर र रामु सापकोटा ४९ जनाको ज्यान लिएको युएस बाङ्ला विमान दुर्घटनाका शोकाकुल परिवारको घाउमा मल्हम लगाउन र देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षित छ भन्ने विश्वास जगाउन पनि त्यहाँभित्रको अव्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने […]
४ चैत्र २०७४, आईतवार २०:०१ ekathmandu Nepal 0
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् […]
जरुरि सुचना !!!अनियन्त्रित रुपमा पृथ्वीमा झर्दैछ चिनियाँ अन्तरिक्ष केन्द्र, छिट्टै पृथ्वीको जमिनमा आइपुग्ने अनुमान
२ चैत्र २०७४, शुक्रबार २०:१४ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौं–चीनको पहिलो अन्तरीक्ष केन्द्र टियागोङ्ग–१ अनियन्त्रित रुपमा पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको छ । यो छि गरिएको छ । चिनियाँ अन्तरीक्ष एजेन्सीले सन् २०११ मा सो अन्तरीक्ष केन्द्र प्रक्षेपण गरेको थियो । नामको अर्थ ‘स्वार्गीय दरवार’ दिने […]
ज्योति मगरलाई यौन हिंसा गर्ने कुन मन्त्री ?
२१ फाल्गुन २०७४, सोमबार १०:१८ ekathmandu Nepal 0
भल्गर डान्स गर्ने र गीत गाउन ज्योति मगरले पत्रकारहरुलाई भनेकी छिन्– ममाथि ठूलै मन्त्रीले यौन हिंसा गरेका छन् । तिमी भल्गरका कुरा गर्छौ, म भन्दा भल्गर देशका नेता छन् । ज्योति मगर यतिबेला युवा जमातमा […]
फेसबुक प्रयोगकर्तालाई अत्यन्तै जरुरी सुचना: फेसबुकमा नयाँ नियम लागू ! यी १० कुरा ध्यान नदिए तपाइको जिन्दगी बर्बाद पनि हुन सक्छ
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १९:३८ ekathmandu Nepal 0
फेसबुकमा कति सूचना पोस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ ? फेसबुक र अन्य सोसल नेटवर्कको यो संजाल मा राख्‍न हुने र नहुने कुराहरुका बारेमा विज्ञहरुले केही सुझाव दिएका छन् । डेभ ह्वाइटलेग्सले साथीभाईसँग भेटघाटका आधारमा फेसबुक रमाइलो […]
नेपालमै भेटियो प्राकृतिक ताजमहल, हेर्नुहोस् तस्विरमा –
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १८:३५ ekathmandu Nepal 0
ाठमाडौ । उदयपुरको गाईघाटमा शनिबार बिहान भ्रमणका क्रममा अत्यन्तै अलौकिक दृष्य देखियो । त्यसलाई तस्विरमा उतारियो । यो कुनै मानव निर्मितपनि हैन । कुनै इतिहासपनि फेला परेको छैन । तर निक्कै पारंगत कालिगढले कुँदेको कुनै […]
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (100)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (92)
मेरो बुढाले मेटाउन नसकेको प्यास कस्ले मेटाउन सक्छ?… (91)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (64)
दिपीकाको पुरै शरिर काँप्न थालेको थियो (61)
के हो तान्त्रिक सेक्स ? किन सामान्य सेक्स… (53)
किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै (45)
मैले ढोका लगाउन भुलेछु , काकाले पुरै देख्नु भयो (1,418)
खलासीले मलाई रात्री बसमा जबर्जस्ती सुतायो (1,239)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (1,148)
बिस्तारै नै गर्छु मैया भने मैले पनि (980)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (976)
किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै (926)
अहिले फेरी लाईभ आएर अर्चना पनेरुले गरिन यस्तो,आफ्नो… (892)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (868)
दिपीकाको पुरै शरिर काँप्न थालेको थियो (783)
यसरी भयो युएस बंगला बिमान दुर्घटना :विमानस्थल… (666)